New Gleen bụ aha nke Blue Origin mere baptizim ohuru gigantic | Akụkọ akụrụngwa
N'ọsọ ịzụlite ụgbọ mmiri ndị nwere ike iji rụọ ọrụ, e nwere ụlọ ọrụ abụọ yiri ka ha dị elu, anyị na-ekwu maka ha SpaceX y Mmiri Mmiri, nke gafere ọtụtụ okwu mgbe ị ghọtara na akara ngosi nke SpaceX rụpụtara dị mkpa karịa n'ihi na rọketi ha gara n'ihu. Ugbu a site na Blue Origin ha chọrọ ịgbara asọmpi ahụ site na igosipụta roket ọhụrụ ha, nke ha mere baptism na aha nke Ọhụrụ Gleen, na-asọpụrụ John Gleen, onye America mbụ na-aga na mbara igwe iji fee na mbara igwe.
Dịka ụlọ ọrụ ahụ kwuru, New Gleen ga-adị akpa roket ya mbụ na, n'ihi nke a, ọ na-achọ ịbanye na ngalaba na-eto eto dị ka ọrụ ohere nkeonwe. Gobanye ntakịrị ntakịrị, dịka ị pụrụ ịhụ n'ihe onyonyo dị n'akụkụ elu nke otu post a, New Gleen ga-abụ nnukwu ibu nwere ikike ịnye ọrụ iji zipu satịlaịtị na ọbụnadị ndị astronauts na ala orbit, ọrụ nke ụlọ ọrụ dịka United Launch Alliace ma ọ bụ SpaceX na-ekesa ugbu a.
Blue Origin na-enye roket ọhụụ ọhụụ
N'ịlaghachi na foto dị ugbu a n'elu nke post a, ọ bụrụ na anyị attentionaa ntị, anyị ga-achọpụta na New Gleen nwere ike ịnwe ruru atọ nke ga - enyere gị aka ịrụ ọrụ ọzọ gafere oke ala ụwa. Na nke a atọ-agba version, na rọketi ga-a elu nke Ogwe 95 mgbe, na ogbo version, ya size ga-ebelata ka Ogwe 82. Dịka ị pụrụ ịhụ, n'okwu abụọ a, ogo ahụ ga-ebu ibu karịa Delta IV Heavy nke United Launch Alliance ma ọ bụ Falcon Heavy of Space X.
Dị ka nkọwa, ihe niile a mụtara na New Shepard ga-etinye n'ọrụ na ọkwa mbụ nke rọketi ka nke a, ga-reusable. N'ihi kpọmkwem na nke a, Blue Origin ugbu a ga-eche nsogbu ọhụụ ihu na nke ahụ bụ na ọ ga-adaba rọketi nke na-esite n'ebe dị elu karịa na ọsọ ọsọ dị elu karịa ule ndị emere rue oge ebe New Shepard na-efe suborbital.
The New Glenn ga-akwado asaa B--4 engines, ka na-emepe, injin ndị ga-emekwa ike ọhụrụ rọketi Vulcano nke United Launch Alliance. Ngwunye BE-4 ga-enye ike na New Glenn nke Ntinye aka nke 3,85, nke itinye ya na ọnọdụ Falcon Heavy ga-enwe ikike nke nde pound ise ebe Delta IV Heavy nwere nde pound abụọ.
Ozi ndi ozo: Blue Origin
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Technology » New Gleen bụ aha nke Blue Origin mere baptizim ọhụụ ọhụrụ ya